Sidan ayuu geelu u dhalaa.. Daawasho wacan! - iftineducation.com
Sidan ayuu geelu u dhalaa.. Daawasho wacan!
aadan21 / February 27, 2016
iftineducation.com – Hadaynu nahay Soomaali waxaynu aad caan ugu nahay murtida, hore ayaa loo yidhi : Soomaali been way sheegtaa balse been kuma maah maahdo.
Murtida iyo maahmaahuhu intooda badan waxa la helay waqtiyadii hore, waatii hore loo yiri : Ragna waa ragii hore, hadalna waa intuu yiri. Inkasta oo laga daba geeyay : Ragna waa ragiisii, hadalna waa ninkii hela.
Hadaba xilliyadii hore in uu qofku arko geel dhalaya may fududayn amba waqti ayay qaadan jirtay, waatii hore loo yiri: Cimrigaaga oo raagaa geel dhalaya ayuu ku tusaa. Balse waqtigan aynu joogno waxkastaaba waa is badaleen oo waxaad hal gujo (click) ku arki kartaa geel dhalaya, Nala daawo.
GUJI HALKAAN KA FIIRSO
dumarka oo la ogaaday inay jacel yihiin inay nolol lawaadaagaan raga geedkooda dheeryahay